Apple Signs Obstetrician Christine Curry Kutarisa kune Hutano hwevakadzi | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch Series 4 yakasvika pamusika iine basa rekugona kuita maelectrocardiograms akananga kubva pachiuno chedu, basa rinotibvumidza kudzora hutano hwedu zvakanyanya. Mumakore achangopfuura, tiri kuona maitiro Apple ari kutarisa kuyedza tipe isu nzira dzekuona matambudziko ehutano. Iko kusaina kwazvino kunotarisa zvakanyanya kune vakadzi.
Sekureva kwe CNBC, Apple yakatora Dr. Christine Curry kuti vatarise pahutano hwevakadzi, chimwe chinhu chisingafanirwe kutishamisa, tichifunga kuti haaziye chiremba wekutanga kushandira pamwe neApple kunatsiridza yako yekutarisa masystem uye nekushandisa matsva mabasa pane chizvarwa chitsva cheApple Watch.
Sekureva kweCNBC, Apple yakahaya varapi vakawanda kuti vashande pazvirongwa zvakasiyana siyana kusanganisira "AC Wellness Clinics" yevashandi veApple. Basa raDr Christine inotarisa kune vakadzi, asi zvakare ichashanda pane zvimwe zvinhu mune iri kushanda kambani, zvinoenderana nevanhu vane hukama nekuhaya.
Panguva yekutsikisa ichi chinyorwa, Dr. Curry haana kuvandudza yavo LinkedIn profile, kuratidza shanduko iyo Apple hiring yaita mune rake basa. Munguva yakapfuura, Curry anga ari GP wevakadzi vane nhumbu inotarisa kwakawanda kwekuedza kwayo kune avo vakabatwa nehutachiona hweZika muSouth Florida.
Hutano hwevakadzi inzvimbo inowanzo kufuratirwa, kusanganisira Apple kubvira pakatanga kambani yayo HealthKit service muna 2015 uye ichiti yakapa 'yakazara' yekutevera hutano, asi haina kusanganisira hutano hwekubereka.
Iyo Apple Watch yave pachayo pachayo merit iyo smartwatch yakanakisa iripo pamusika, Nekuda kukuru kumabasa matsva ayo aanotipa, iyo ECG basa uye yambiro yekudonha kuve iwo maviri makuru mabasa akawedzerwa nechizvarwa chechina cheApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inoshandira mukadzi anozvara Christine Curry kuti atarise pahutano hwevakadzi
Iyo yazvino macOS Mojave beta inosanganisira mareferenzi kune itsva LG yekutarisa